Miyaad Sameyn Doontaa Doonista Ilaahay?
Waad ku mahadsantahay inaad waqti siisay akhriska buuggan sidaad Markhaatiyaasha Yehowah dad ahaan wax uga baratid adna aragtid hawlaheenna iyo ficilada ururkeenna. Waxaan rajeynaynaa inaad buuggan ka garatay inaan maanta nahay kuwa doonista Yehowah sameynaya. Waxaan kugu talinaynaa inaad sii wadatid barashada Ilaahay oo ad u sheegtid ehelkaaga iyo saaxiibbadaada waxaad baranaysid oo ad kulammadeenna si joogta ah nagala qaybqaadatid.—Cibraaniyada 10:23-25.
Markaad Yehowah wax ka sii baratid waxaad sii ogaanaysaa jacaylka weyn uu kuu hayo. Tanna waxay kugu dhaqaajin doontaa inaad sameysid wax alla iyo waxaad sameyn kartid sidaad dib ugu muujisid jacaylka ad isaga u qabtid. (1 Yooxanaa 4:8-10, 19) Sidee baad jacaylkaad Ilaahay u qabtid noloshaada uga muujin kartaa? Maxay kugu wanaagsan tahay inaad adeecdid xeerarkiisa xagga wanaagga? Sidee baadna u kordhin kartaa rabitaankaad u leedahay inaad nala sameysid doonista Ilaahay? Macallinkaaga Kitaabka baa kula eegi karo jawaabaha sidaad adiga iyo reerkaagaba taladan u raacdaan “nafsaddiinna ku haya jacaylka Ilaah” idinkoo rajeynaya “nolosha weligeed ah.”—Yuudas 21.
Waa Maxay Dhigashada Kitaabka?
Hel jawaabaha suʼaalaha ku saabsan barnaamijkeenna dhigashada Kitaabka oo lacag la’aanta ah.
Wadaag Wadaag Miyaad Sameyn Doontaa Doonista Yehowah?